Faahfaahin dhimasho & dhaawac saxafiyiin Maleesiyan ah Muqdisho loogu geystey – SBC
Faahfaahin dhimasho & dhaawac saxafiyiin Maleesiyan ah Muqdisho loogu geystey
Warar dheeraad ah oo ka soo baxaya gawaari ay wateen dhakhaatiir & saxafiyiin Maleesiyaan ah oo ay rasaas ku fureen ciidamada AMISOM ee ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimada dalka.
Tacshiiradan ay ciidamada AMISOM ku fureen baabuurta ayaa waxaa wararkii hore sheegayeen in uu ku dhintey nin dhakhtar ah oo u dhashay dalka Maleysiya hase yeeshee warar faahfaahsan oo soo baxaya ayaa sheegaya in qofka ku dhintey tacshiiradaasi uu ahaa wariye ka tirsan Telefishinka Bernama TV ee laga leeyahay wadanka Maleysiya.
Wariyaha dhintey ayaa magaciisa lagu sheegay Noramfaizul Mohd Nor, oo 39 sano jir ahaa kaasi oo 30 daqiiqo ka dib u dhintey dhaawac rasaaseed oo soo gaaray, halka sidoo kale uu ku dhaawacmey Aji Sareger Mazlan oo isna ka tirsanaa isla Telefishinkaasi.
Haweenay kale oo iyana saxafiyad ah oo lagu magacaabo Tan Su Lin kana tirsan Tv-ga Astro Awani ayaa sheegtey in gaariga dhanka midig rasaas looga soo furey, iyadoo isla goobta uu ku geeriyoodey Noramfaizul Mohd Nor.
Dhacdadan ayaa ka dhacdey wadada aada dhanka garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho gaar ahaan agagaaraha Garaasha Xaaji Dool.
Noramfaizul Mohd Nor ayaa wuxuu ka tagey xaas & laba caruur ah oo kala jira 8 sano & sadex sano, waxaana uu u yimid magaalada Muqdisho sidii uu xaalada abaaraha & macaluusha ugu soo bandhigi lahaa dadka wadankiisa oo xiligan ku hawlan ururinta gargaarka Soomaalida abaaraha ku dhibaateysan.
Xaaskiisa oo lagu magacaabo Norazrina Jaafar oo 37 jir ah waxay sheegtey inay ku sii jeeday xiligii geerida ninkeeda loo soo sheegay guriga qoyskiisa.
“Wuxuu ii sheegay in uu baxayo safar hawlo bini’aadamtinimo ah, isla markaana dalka uu u shaqeynayo, wuxuu ii sheegay inaan nafteyda & tan caruurteena aan ka taxadarno, aad ayuuna safarkaasi ugu xiiso qabay” ayey tiri Norazrina.
Labada ilmood ee uu ka tagay wariya Nor ayaa lagu kala magacaabaa Mod Irfan oo 8 sano jir ah & Mohd Naufal.
Nor wuxuu ka mid ahaa in badan 30 dhakhaatiir,samafalayaan & saxafiyiin u dhashay wadanka Maleysiya oo ku sugan Muqdisho.
Noramfaizul Mohd Nor wuxuu ka mid noqonayaa 23 qof oo hawlo saxafaadeed ku lug lahaa oo Soomaaliya lagu diley tan iyo sanadkii 2007-dii.
Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dawlada KMG Soomaaliya & ciidamada AMISOM oo falkan ka dambeeyey, kuwaasi oo wararku sheegayaan inay ka shakiyeen gawaarida ay wateen dhakhaatiirta & saxafiyiinta Maleesiyaanka.